ွGame forum လေးထဲ့ ပေး၇န်တောင်း ဆိုခြင်းပါတယ်။ - MYSTERY ZILLION
ွGame forum လေးထဲ့ ပေး၇န်တောင်း ဆိုခြင်းပါတယ်။
March 2011 edited March 2011 in Idea
ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော် MZ မှာ game forum လေးထဲ့ပေး၇န်တောင်းဆိုခြင်း ပါတယ်။ game ကတော့ လူငယ် ၊ လူကြီး
ကော အ ခုခေတ် မှာ တောတောများများ ဆော့လာကြပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံက ထုတ်တဲ့ computer journal ,
internet journal , pc world စတဲ့ စာဆောင်တွေ မှာတောင် game guide နှင် game အကြောင်းတွေကို မဖြစ်မနေ
ေ၇းလာကြပါတယ်။ game ကတော့ IT နဲ့ စပ်ဆက်နေပါတယ်။ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် game လေးတွေ
share မယ် ၊ game ကြောင်းလေးတွေ ပြောဆိုကြမယ်။ နောက် game install လုပ်ပုံတွေ ၊ ကိုယ်စက် နဲ့ ကိုက်မကိုက် ၊
install လုပ်၇င် error တက်တာတွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒီကြောင်းလေးတွေ ပြောဆိုဆွေးနွေး ဖို့ အတွက် game forum လေ
ကို တောင်းဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
sorry ... we can accept game development instead of game ... you can ask installation or other error in
You can check Games @ http://mmgamers.com/ <i think you already known> and @ http://www.portalmyanmar.com/ ,too. It's new and created by MMGamers' creator Wayne.
ဟုတ်ကဲ့။ ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ်။
mmgamers.com ဟုတ်ဖူးလား ???
Thanks, already edited.